Usaama bin Laadin waxaan la kulmey saddex jeer. (Waxaa qoray: Hamid Mir) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Usaama bin Laadin waxaan la kulmey saddex jeer. (Waxaa qoray: Hamid Mir)
Last updated Sep 13, 2021 374 0
20 sano kahor, 7 isbuuc kadib weeraradii 11 Septembar, waxaan ahaa wariyihii ugu dambeeyay ee waraysi la yeesha Usaama bin Laadin, waxaan kula kulmey Afqaanistaan, xilli ay socdeen ololihii duqeymaha Maraykanka.
Bin Laadin wuxuu ku faanay inuu Maraykanka u dhigay dabin ku biya shuban doono inuu ku dulloobo Afqaanistaan- sidaba ku dhacday midwoga Soofiyet- isagoo sidoo kale qiyaasayay in ugu dambeyn uu wadahadal dhexmari doono Taalibaan iyo Maraykanka.
20 sano kadib, Usaama waa mid dhintay, dhamaan waxyaabihii uu sahdaaliyeyna waxay noqdeen kuwa dhab ah, isaga oo keliyana maahan dadka sidaas filayay.
Waa suuragal in Maraykanku helo waxyar oo tacsi ah, amaba marka si dhab ah loo hadlo uu ku guuleystay inuu dilo Usaama bin Laadin, balse muuqaalka guud ee weyn waa mid xasiloonidiisu yartahay, Al-Qaacida waxay weli ku sugantahay Afqaanistaan, furuucda hoostagtana waxay dagaallo ka hurinayaan qeybo kamid ah caalamka.
Ma hubo in Maraykanka iyo guud ahaan dowladaha reer galbeedka ay si buuxda u fahmeen casharkii ay ka barteen Afqaanistaan.
Markii ugu horeysay ee aan Usaama bin Laadin kula kulmey god ku yaala Toora boora dalka Afqaanistaan sanadkii 1997-dii, wuxuu filayay in Maraykanku uusan sii ahaan doonin awoodda milliteri ee ugu weyn caalamka, isagoo weliba qiyaasayay inuu abuurmi doono isbaheysi dhexmara Afqanistaan, Pakistaan, Iiraan iyo Hindiya, kaasoo ka dhan ah Maraykanka.
Dabcan weli Maraykanku waa awood milliteri oo jirta, sahdaalintaas labaad ee uu sameeyay Usaama bin Laadinna waxay xilligan aan qorayo maqaalkan u muuqataa mid dhaboobi rabta.
Wuxuu fahmayay Usaama bin Laadin in awoodda Maraykanka ay abuuri doonto in cadowgeedu yeeshaan qadiyad ay ku mideysanyihiin, xaqiiqdii wuxuu dareemayay in awoodda Maraykanka ay noqon doonto mid kamid ah nuqaad dacfigeeda.
Kadib weeraradii 11 Septembar, waxaan soo tabiyay loolannada ka socda Ciraaq illaa Suuriya, iyo Lubnaan illaa Filastiin, Usaama bin Laadin wuxuu heley ixtiraamka muslimiin badan, keliyana maahan fakarka Jihaadiga ah ee uu xambaarsanyahay darteed, balse waxaa qeyb ka duulaanka Maraykanka uu ku qaaday Ciraaq iyo taageerada uu siinaya dowladaha dabadhilifka ah ee ka jira caalamka Islaamka.
Waxaan waraysiyo la yeeshey wasiirada arimaha dibadda Collen Powel, Condelleza Rice, Hellery Clinton iyo John Kerry iyo saraakiil badan oo katirsan milliteriga Maraykanka, waxayna dhamaantooda ku faaneen iney guulo ka gaareen dagaalka ay la galeen waxa loogu yeero argagaxisada, balse waxaysan fahmin in dagaalkooda uu soo saaray argagaxiso horleh.
Shakki kuma jiro in Maraykanku ku guuleystay weeraradii 11 Septembar in uu diyaarado drones ah ku dilo hogaamiyaal sarsare oo katirsan Al-Qaacida iyo Taalibaan, iyadoo ay sidaas tahay hadana dood kama taagna in weeraradaas ay lahaayeen natiijooyin salbi ah oo ay kamid tahay iney soo saareen boqollaal naftood huriyaal ah, waxayna noqdeen naftood huriyaashaas hubka ugu adag ee ay Taalibaan kaga hortagtay Maraykanka iyo ururka NATO.
Awoodda milliteriga waxay xallin kartaa qaar kamid ah dhibaatooyinka taagan, balse waxay abuureysaa mashaakil kale oo dheeraad ah, wuxuu doonay Bin Laadin inuu dandaansado Maraykanka si uu u adeegsado awoodiisa milliteriga, maxaa yeeley wuxuu dareemayay in taasi ay abuureyso mashaakil horleh inkabadna inta ay xallineyso, iyadoo ay sidaas tahayna waxaa haboon in la ogaado in dagaalka aanu ahayn wadada keliya ee uu dal ku xaqiijin karo danihiisa.
Washington waxaa la gudboon inaaney soo celin khaladaadkeedii hore, waana wax iska cad in maamulka Biden aanu raalli ka ahayn in Taalibaan ay la wareegtay talada, balse waxaa haboon in la ogaado in Taalibaan ay leedahay awood dhab ah.
Shakki kuma jiro in ka bixitaanka Maraykanka ee Afqaanistaan uu sii xoojinayo awoodda jamaacaadka jihaadiga ah ee jooga caalamka.
Waraysiga aan la yeeshey Usaama bin Laadin 1998-dii, wuxuu iigu sheegay iney suuragal tahay in Maraykanku dilo, balse aaney xakameyn Karin noloshiisa, sidoo kale wuu ku saxnaa qiyaastaas, marka yeynaan u ogolaan in dhamana waxyaabihii uu filayay ay dhab noqdaan!
Dhagayso Sheekh Usaama bin Laadin waxaan la kulmey saddex jeer